Ny mpanamboatra YK-11 roahina (431579-34-9) - Phcoker Chemical
SKU: 431579-34-9 Sokajy: Serasera Sarmana
Roda YK-11 voly (431579-34-9) video
Rohan'ny YK-11 (431579-34-9) Famaritana
YK11, fantatra ihany koa amin'ny Myostine, dia heverina ho iray amin'ireo SARM mahery indrindra eo amin'ny tsena. Izy io dia modulator mpikirakira steroidal selektive androgen. Ny zava-mahadomelina dia manana hetsika anabolika amin'ny vitro ao C2C12 ary maneho hery lehibe kokoa noho ny dihydrotestosterone (DHT) amin'ity lafiny ity. YK11 koa dia inhibitor amin'ny Myostatin. Afaka manampy anao hahazo tombony izy ireo ary hihena matavy.
Rano YK-11 roapolo (431579-34-9) Specifications
Product Name Vola YK-11 roapolo
Anarana simika (11a, 17E) -20 - [(17,20-Methoxyethyliden) bis (oxy)] - 1-oxo-3-norpregna- 19-diene-4,20-carboxylic Acid Methyl Ester; YK21 ((11α, 17E) -20 - [(17,20-methoxyethylidene) bis- (oxy)] - 1-oxo-; ADN (terrafatra ny trondro gnika YK3 11S rRNA); GenBank AB16
molekiolan'ny Formula C25H34O6
molekiolan'ny Wvalo 430.53386
mitsonika Point 190-200 ° C
Ny antsasaky ny biolojia 6-10 ora, miankina amin'ny olona
Vola YK-11 roapolo Application Mpandrindra ny endri-tsidin'ny Androgen, Myostatin Inhibitor
Rohan-tsokajy YK-11 roapolo (431579-34-9) Description
Mpiserasera maro no mihevitra fa ny YK11 no fanalahidy hamahana ny fahafaha-miditra manontolo amin'ny vatana ary ny fahombiazan'ny tanjaka haingana dia haingana amin'ny vokatra vitsy. YK11 dia toa ny SARM ambony noho ny fanadihadiana, raha ny tena marina, io zava-mahadomelina io dia tsy marika SARM. Ity lahatsoratra ity dia manaparitaka ny siansa sy ny fanamarihana mba hanomezana hevitra mazava momba ny zavatra mety hitranga avy amin'ity hybride SARM-steroid ity, miaraka amin'ny risika sy ny vokatra hafa.
Nilaza ihany koa izy fa ny YK11 dia manana fahafahana hampihenana ny asan'ny myostatin, ka mahatonga azy ho inhibitor ny myostatin. Ny harendre YK-11 dia iray amin'ireo mahery indrindra any. Tsy azonao ampitahaina marina tokoa ny YK amin'ny LGD-4033 na ny SARM hafa noho ny fahamatorana.
Na izany aza, na dia matanjaka be aza ny vovony YK-11 dia mitazona ao an-tsaina fa nisy ny fianarana vitsivitsy natao tamin'ity vondrona ity. Izany no antony lehibe indrindra mahatonga ny ankamaroan'ny olona toa mandeha amin'ny SARM toy ny Ostamuscle, RAD-140 na GW-501516.
Ny YK11 dia mahazo tombontsoa amin'ny bodybuilders noho ny fahafahany haingana haingana amin'ny hozatra amin'ny fihenan-tsakafo kely, toy ny SARM samihafa. Ny endriky ny YK11 dia miavaka. Ny molekiolan'ny YK dia miombom-pihetseham-po miaraka amin'ny steroidina noho ny SARMs, na dia matetika napetraka ao anaty siny iray toy ny SARM hafa tsy steroid.
Ny fianarana finday dia manolotra fa ny fiakaran'ny YK11 dia mampitombo. Hitan'ny mpikaroka fa mampitombo ny proteista follistatin (ahiba myostatin).
Mety hampitombo ny fahasalaman'ny taolana koa ny YK11. Tao anatinà fanadihadiana iray momba ny sela bone, dia nampitombo ny proteinina ho an'ny taolana ny YK11.
Ny mpikaroka bodybuilders izay nanandramana tamin'ny YK11 dia mitatitra ny fahombiazana amin'ny hozatra lehibe sy ny fatiantoka mavesatra amin'ny fihenan-tsakafo. Na izany aza, tsy misy ny fikarohana momba ny biby na ny olombelona ankehitriny momba ny YK11 ary tsy mazava ny fiarovana azy.
Rano YK-11 roahina (431579-34-9) Mekanisma amin'ny asa
Ny YK11 dia manana rafitra simika mitovy amin'ny DHT ary izany dia aseho amin'ny fomba itodihany amin'ny receptors androgen. Ny vatana dia mamokatra ny DHT ho azy mba hampiroborobo ny fahasalaman'ny prostaty, ny fitomboan'ny volo, ary ny fivoarana ara-pahasalamana mety.
Raha toa isika any am-pianarana any YK11 ho toy ny SARM dia izy io no ho mafy sy matanjaka indrindra amin'ny karazany eny an-tsena. Izany dia satria mivezivezy fotsiny ny receptors androgen amin'ny ampahany, izay miteraka hetsika androgenic fihenam-bidy hitifitra ny tafo. Ankoatra izany, ny YK11 dia fantatra amin'ny maha-tohibatan'ny myostatin.
Ny mpikaroka dia nanao fianarana samirery mba hahitana ny fomba fiasa hananganana ny hozatra. Ny valiny dia mampiseho fa mikendry hampitombo ny level of follistatin fotsiny izy io. Follistatin dia proteinina iray hafa ao amin'ny vatan'ny olona izay manampy ny fitandremana ny myostatin. Ny hôstônina dia hormone izay ny asany dia ny mampihena ny fitomboan'ny vozon'ny tsy fahampian-tsakafo.
Hatramin'izao, i YK11 ny vovony menaka dia manana fahafahana manakana ny myostatin.
Ny porofo fanampiny dia manoro hevitra fa ny YK11 dia afaka mampiroborobo ny fitomboan'ny taolana amin'ny alàlan'ny fanelingelenana ny vavahady iray izay miasa toy ny DHT.
soa ny vovo-koditra RK YK11 (431579-34-9)
◆ Mampitombo ny haben'ny ratra
Na dia tsy SARM aza ny YK11, dia manana fahaizana mahavariana hanatsarana ny fitomboan'ny vozona. Voalaza fa matanjaka toy ny S23.
Izany dia satria mampitombo ny level of follistatin izay mampitombo ny fahaizan'ny vatanao mamokatra sela hozatra. Follistatin koa dia tompon'andraikitra amin'ny famongorana ny myostatin, ka manokatra anao amin'ny mety hahazoana ny tsiranoka tsy misy farany. Fa raha misy ny tsindry ny follistatin amin'ny fomba rehetra, dia tsy hitranga ny fanesorana ny myostatin, izay mety hahatonga ny YK11 tsy mahomby.
Tsy tokony hiteny toy ny rakitsoratra tapaka fa tsy misy fianarana olombelona na biby mba hamerenana ny angon-drakitra ao anatin'ity vondrona ity.
Ny zava-drehetra ananantsika dia porofo mivaingana miorina amin'ny fanavaozana bodybuilder ao anaty sehatra an-tserasera. Ny zavatra lazainy amintsika dia ny nahafahan'izy ireo nihena ny fihenan-tsakafo matavy ary ny lanjan'ny 15 dia mendrika hozatra amin'ny hozatra amin'ny fotoana fohy.
◆ Manamafy ny taolana
Ny hormonina momba ny firaisana dia tena ilaina amin'ny fitazonana taolana mahery sy mahasalama. Ny porofo misy dia mampiseho fa mety hampitombo ny herin'ny taolam-paty YK11 amin'ny fifehezana ny solosaina amin'ny androgen, izay mitovy amin'ny an'ny ankamaroan'ny SARM.
Ny YK11 dia afaka mampitombo ny habetsahan'ny PKB (proteinina Kinase B) izay hita ao amin'ny selan'ny vatana izay manamora ny fitomboan'ny cell cellules.
Aza adinoina fa te ho matanjaka sy salama matanjaka sy taolana ianao mba hisorohana ny fery. Mety ho afaka hanampy amin'io lafiny io koa izy satria mahomby tsara amin'ny fanorenana ny hozatra, manohana ny fahasalaman'ny taolana ary manamaivana ny fiantraikan'ny taova bone.
Rantsana YK-11 roahina (431579-34-9) nomerika
Ireo bodybuilders izay nampiasa ny vovony menaka YK11 dia milaza fa ny fampidirana azy amin'ny dosage amin'ny 10 amin'ny 15 mg isan'andro dia miasa tsara ho azy ireo. Ny hafa dia nitatitra vokatra tsara tamin'ny 5 mg isan'andro. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mamaky azy io amin'ny 4 hatramin'ny herinandro 8. Hahita ihany koa ireo mpampiasa izay miara-miasa amin'ny SARM samihafa.
Side effects ny Rohdy YK-11 (431579-34-9)
▲ Hatramin'izao, ny fanadihadiana finday ihany no natao tamin'ny YK11.
Tsy misy porofo momba ny fitsaboana na ny fianarana biby, mba hamerenana ireo fanambarana rehetra momba ny zava-mahadomelina.
Tokony hahatonga anao hieritreritra indroa momba ny fikarohana miaraka amin'ity vondrona ity. Angamba tokony hanara-maso ireo fitambarana samihafa toy ny Ostarine sy Ligandrol. Manana fampahalalana betsaka sy fikarohana izy ireo.
Voalaza fa ny YK11 dia mety misy poizina amin'ny aty. Amin'ny lafiny iray dia mety hisy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny volo, ny tadim-peo, ny fahasalaman'ny prostaty ary ny taova hafa manan-danja ao amin'ny vatana.
YK-11 Cycle sy fanandramana avy amin'ny mpampiasa tena izy
Thevis, M., Piper, T., Dib, J., Lagojda, A., Kühne, D., Packschies, L., ... & Schänzer, W. (2017). Ny endri-tsoratry ny spectrometric an'ny sela mpanodin-tsokosoko (SARM) YK-11 ho an'ny fanaraha-maso doping. Rapid Communications amin'ny Spectrometry Mass, 31(14), 1175-1183.
Kanno, Y., Ota, R., Someya, K., Kusakabe, T., Kato, K., & Inouye, Y. (2013). Ny mpikirakiran'ny sela androgen, YK11, dia manara-maso ny mari-pahaizana myogenic momba ny myoblasts C2C12 avy amin'ny expression folistatin. Biolojika sy Pharmaceutical Bulletin, 36(9), 1460-1465.
Piper, T., Dib, J., Putz, M., Fusshöller, G., Pop, V., Lagojda, A., ... & Thevis, M. (2018). Fanadihadiana momba ny metabolism in vivo amin'ny SARM Y1K11: Famantarana sy famaritana ny metabolites mety ilaina amin'ny fanaraha-maso doping. Ny fitsapana sy ny fanadihadiana, 10(11-12), 1646-1656.